မြန်မာ့ ဘော်လုံး | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Myanma News » မြန်မာ့ ဘော်လုံး
Posted by MAUNG on Nov 19, 2011 in Myanma News | 14 comments
ဟင်း…. လို့ဘဲ သက်ပြင်းချရတော့ မယ် ။ မလေး ဝမ်း ဇီး တဲ့း(
ရှစ်ပေ စလောင်းကမရှိ ။ ရှိတဲ့စလောင်းက မပြ ။ Soccer myanmar မှာညီအစ်ကို တစ်ယောက်ရေးတဲ့ comment လေးကျေးဇူးနဲ့ VTV2 ကနေ live stream လေးကြည့်ခွင့်ရတော့တော်တော် ပျော်သွား တာ။ ပွဲ စစချင်း ကစားပုံ ၊ အရှိန် ၊ အထိန်းအသိမ်း လေးတွေကြည့် ရင်း နဲ့မမြင်ရတာ အခိုက်အတံ့ တစ်ခုထိကြာပြီဖြစ်တဲ့ မြန်မာ့ခြေ ကို အတိုင်းအတာတစ်ခုအထိ ကျေနပ်၊ မျှော်လင့်မိပါတယ် ။ အဲ ။ပွဲစဉ်တစ်လျှောက် လုံးပြင်နိုး ၊ပြင်နိုး နဲ့ ပွဲသာပြီးသွားတယ် ၊မပြင်ခဲ့တဲ့ အားနဲချက်ကလေးတွေ ကို ကျွန်တော် စဉ်းစားမိသလောက်၊ အပြုသဘောနဲ့ ဒီစာကိုရေးပါတယ် ။
၁ ။ နောက်တန်း သမားတွေ ဘောလုံး ရတဲ့ အကြိမ်ရေတော်တော် များများလူမကြည့် ဘဲစွတ် ကန်တင်တော့တာဘဲ ။ Sweeper ဟာလိုအပ်ရင် ရှင်းထုတ်ရမယ် ဆိုတာအားလုံးအသိပါ ။ ဒါပေမဲ့ ဘောလုံးရတိုင်းစွတ် ကန်တင်တော့ မလေးနောက်ချန်လူ တစ်ယောက်မဟုတ် တစ်ယောက်စီ ရောက်တော့ တာဘဲ။
၂ ။ နိုင်ငံ ကိုယ်စားပြု ကစားတာ ဟာဘယ်လောက် တာဝန်ကြီးတယ် ။ စိတ်ဖိစီးမှူ့ ရှိတယ်ဆို တာလဲ နားလည်ပါတယ်။ ခုထက်ပိုပြီးအားလုံး စိတ်နဲနဲ အေးအေး ထားစေချင်ပါတယ် ။ စိတ်ဖိစီးမှူ့ခုထက်နဲနဲ လျှော့ နိုင်ရင် ခုထက်ပို ကောင်းအောင် ကစားနိုင်မယ် လို့ အကြွင်းမဲ့ယုံ ကြည်ပါတယ် ။
၃ ။အုပ်စုလိုက် ကစားပုံဟာ မလေးနဲ့ ယှဉ်နိုင် ပေမဲ့၊ တစ်ယောက်ချင်းယှဉ် လိုက်ရင် ကျွန်တော်တို့ကစားသမားတွေ တော်တော်များများဟာ၊ ခြေတစ် လှမ်း အမြဲနှေး နေပါ တယ် ။ ( Stress ကြောင့် အများကြီးပါမယ်လို့ထင်မိပါတယ် ။)
၄ ။ ဒိုင်လူ ကြီးရဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်တိုင်းဟာ မမှန်ပါဘူး ။ အသင်းခေါင်းဆောင်ဟာ လိုအပ်ရင် ပါးနပ်စွာ စောဒက တက်ခွင့် ရှိပါတယ် ။ အဲလို လုပ်နိုင်အောင်လဲ English စကားပြော လေးလဲ အားလပ်ရင် လေ့လာနိုင် အောင် အသင်းကြီးကြပ် သူတွေ စီစဉ်ပေးသင့်ပါတယ် ။ မှားမှား၊ မှန်မှန် ဒိုင်ဝီစီ မှုတ်တိုင်း လက်အုပ်ချီ တောင်းပန်တာ မျိုးမလိုအပ် တဲ့ အချိန် တွေမှာရှောင် သင့်တယ်လို့ ထင်ပါတယ် ။
ကျွန်တော် တော့ ရွာသူ၊ရွာသားများ ရဲ့ ကိုယ်ပိုင်အမြင်လေးတွေလဲ ပြောပြကြ ပါဦး ။
ကိုယ်ပိုင်အမြင်ကတော့ ဆဲလွန်းလို့ မိန်းမနဲ့ ရန်ဖြစ်လာခဲ့တယ်ဗျာ။
ဒါဗျဲ။ ဗျန်းဗျန်းဗျန်း။ ဒန်တန့်တန်
ကတောက်… မြန်မာအသင်းခြေကို အားရပြီး
ဆဲလွန်းတာ မိုးမွှန်သွားလို့ … မယ်တော်နဲ့ ဖခမည်းတော်က…
ဗြောတင်လိုက်လို့… အင်တာနက်ဆိုင် ရောက်ခဲ့ကြောင်းပါ။
မြန်မာအသင်းရေ… ဗျန်း… ဗျန်း… ဗျန်း…
ကျွန်တော်လည်း အားမရလို့ထပ်ပြောဦးမယ် … အမှားကတစ်သိန်း ကောင်းတာကတစ်ကွက် … အမှားမပြင် စိတ်ဓာက်ကမရှိ လူတွေကလည်း ပိန်ညောင့်နေတာပဲ မောနေပြီ မပြေးနိုင်တော့ဘူး ရှုံးနေတာတောင် စိတ်ပါလက်ပါ မကန်ဘူး … အိမ်ကတီဗီ ရိုက်ခွဲမိမှာစိုးလို့ ဒါး ကိုင်ပြီး ထင်းခွဲလိုက်တယ် .. ကောင်းရော … ထင်းတုန်းတွေကို ဘောလုံးသမားတွေလို သဘောထားလိုက်တယ် … အေးရော …
သားတို့ဆီမှာ မီးကလဲမလာ၊ မီးစက်ကလဲ မရှိတော့ မကြည့်လိုက်ရဘူးဗျို့။ မီးတွေ ဘယ်ကိုများ ရောင်းစား ကုန်ကြပြီလဲမသိ။
ဟေ့ မနိုင်လို့ဆဲတာ မဟုတ်ဘူးဟေ့
နိုင်နှိုင်ခြေရှိရဲ့သားနဲ့ ရှံးလို့ဆဲတာ တတိယနေရာတွေ ဘာတွေလာမပြောနဲ့ ပထမမှမရရင် ဘာမှမလိုချင်ဘူး …
ရှံးလဲ ပြတ်ပြတ် နိုင်လဲပြတ်ပြတ်ပဲ
မနိုင်မဲ့တူတူ အုပ်စုမှာထဲက ထွက်ပါတော့လား ….
အခုတော့ နေမရ ထိုင်မရ ဒေါသပဲ ထွက်နေတယ် …
မနေ့က ကြည့်ပြီး ထိုင်ဆဲနေရတယ်
86 မိနစ်မှာမှ မလေးက တစ်ဂိုးသွင်းသွားတာ တော်တေ်ာ စိတ်နာဖို့ကောင်းတယ်
အကို ပြောတဲ့အားနည်း ချက်တွေ ကို တဖြည်းဖြည်းနဲ့ ပြင်ရမှာပေါ့ တာဝန်ရှိသူတွေလဲ အကိုတွေသလို တွေကြပါစေ လို့ ဆုတောင်းရမှာဘဲ ကျွန်တော်တို့လည်းထုံးစံအတိုင်းပဲပေါ့ ဆဲလည်းဆဲ အားလဲပေးပေါ့ သူတို့ ကိုမှ သံယောစဉ် မဖြတ်နိုင်တာ
မြန်မာဘောလုံးသမားတွေ အကောင်းဆုံး ကစားသွားပေမယ့် လိုအပ်ချက်တွေ ရှိနေပါသေးတယ်..။
တစ်ဦးချင်း Skill လိုပါသေးတယ်..။ အထူးသဖြင့် Team Work လိုတယ်လို့ ထင်ပါတယ်..။
မြန်မာတစ်ယောက်ဘောလုံးရရင် မလေး ၃ ယောက်လောက် ၀ိုင်းဖျက်လို ပျက်တာများပါတယ်..။
မလေးက လူကပ်ကစားပုံ ကောင်းပြီး မြန်မာနောက်တန်း လူကပ်ပုံ အနည်းငယ်လိုတယ်လို့ ထင်ပါတယ်..။
တတိယလုပွဲမှာ အကောင်းဆုံးခြေစွမ်းပြ ကစားနိုင်ပါစေ..။
မြန်မာ့ဘောလုံး တိုးတက်ဖို့ MNL တစ်ခုတည်းနဲ့တော့ မလုံလောက်ဘူးဆိုတာ သက်ဆိုင်ရာလူကြီးမင်းတွေ သိမယ်လို့ထင်ပါတယ်..။ တစ်ပွဲတိုးမလုပ်ဘဲ ကျောင်းပွဲတွေ၊ ရပ်ကွက်ပွဲ၊ မြို့နယ်ပွဲ၊ တိုင်းနဲ့ပြည်နယ်ပွဲတွေ၊ ဖိတ်ခေါ်ပွဲတွေ များများလုပ်ပြီး တစ်နိုင်ငံလုံးက လူငယ်တွေ ကို စနစ်တကျလေ့ကျင့်ပျိုးထောင်ပေးတဲ့ စီမံကိန်းတွေ ပေါ်ထွက်လာခြင်းဖြင့် မြန်မာ့ဘောလုံး တိုးတက်အောင်မြင်ဖို့ မျှော်လင့်ပါတယ်..။
အဓိက က ဘောလုံးskill အားနည်းတာ၊ အသင်းလိုက်စုဖွဲ.မှုမှာလည်း မလေးကိုမယှဉ်နိုင်ပြန်ဘူး၊ ၁၈ ဂိုက်စည်းထဲဘောလုံး၇၇င် ၇တဲ့တစ်ယောက်ကပဲ ရုန်းနေပြီး ကျန်တဲ့သူတွေက ၇ပ်ကြည့်နေတယ်။ အနည်းဆုံးက လှုပ်နေ၇မဲ့ဟာကို၊ အဲ့ဒီတော့ မလေးနောက်တန်းက လှုပ်နေတဲ့ကောင်ကို ချုပ်လိုက်တာနဲ့ မြန်မာတိုက်စစ်လစ်သွားေ၇ာ။ အခြေခံ ကျကျအများကြီးလုပ်ယူ၇ဦးမယ်။ အချိန်တော်တော်ယူ၇ဦးမယ်။ အဓိကက တာဝန်၇ှိသူတွေ၇ဲ့ အခန်းကဏ္ဍပဲ၊ အဲ့ဒီတာဝန်ရှိသူဆိုတဲ့ ငတိတွေကို တော်တော်သင်တန်းပေး၇မယ်၊ ပျက်စီးနေတဲ့စိတ်ဓါတ်တွေကို အစကနေပြင်မှ ၇တော့မယ်။ မြန်မာပြည်ကြီး တိုးတက်ပါစေ။
ဘောထိန်းရင် တကိုက်လောက် ထွက်ထွက်သွားတာ …
လျှပ်တပြတ် အငိုက်မိမယ့် စွမ်းဆောင်ရည်မျိုးမရှိတာ
တဖက် အသင်း ကစားပုံကို သမားရိုးကျ ပေါ့ပေါ့တွက်ထားတာ..
စိတ်ဓါတ်ပြင်းပြမှု အကောင်းဆုံးအနေအထားမရှိတာ …..
၂၀၀၄မှာ ဂရိဗိုလ်စွဲတုန်းက … အင်မတန်ကျစ်လစ်သိပ်သည်းပီး …
နေရာအလိုက် ထိုးဖောက် တိုက်စစ်ဆင်ကစားပီး..
ပြိုင်ဘက်တွေကို အနိုင်ယူနိုင်ခဲ့လို့ …
မယုံရင်ပြန်ကြည့်ကြည့် ……အဲ့ပြိုင်ပွဲတလျောက် ဂိုးသွင်းခဲ့တာ
အီတာလျံ တိုက်စစ်မှူးတွေတင်မကဘူး …ကွင်းလည်နဲ့
တောင်ပံကစားသမားတွေပါ ပါတယ်..(စုစုပေါင်း ဂိုးသွင်းနိုင်ခြေရှိသူ ၁၁ယောက်တောင်
ရှိတယ် ဆြာတို့ …ဘယ်နောက်တန်း ဘယ်လိုကပ်မလဲ .)
G.Buffonကို ပြိုင်ပွဲတလျောက် အုန်းဂိုး ၁ဂိုး… ဖိုင်နယ်မှာ ဇီဒန်းသွင်းတဲ့
ပယ်နယ်တီ တစ်ဂိုး ကလွဲရင် ဘာမှ ခွင့်မပြုခဲ့ရဘူး…
ပါရမီရှင် ကစားသမားမပါဘူးနော်. …teamworkအရ …strategyအရ
နောက် တပွဲချင်း စီမံပုံအရ ကျော် လွှားခဲ့တာချည်းပဲ …
ရွှေပဲဗျာ ..ရွှေပဲလိုချင်တာပေါ့ …
မျှော်လင့်မထားပါဘူး…။ ကိုယ့်အသင်းက အများကြီးလိုအကပ်နေသေးတာ…။ ဒီအဆင့်ရောက်သွားတာပဲ ကျေနပ် စရာကောင်းနေပါပြီ…။ တတိယတောင် မျှော်လို့မရနိုင်ပါဘူး…။ ဒီနေ့ မြန်မာ့အလင်းမှာတောင် ဘောလုံးပွဲ သတင်းမပါတော့ဘူး…..။ မနက်ဖြန် ကန်တဲ့ ပွဲတောင် လွှင့် ချင်မှ လွှင့်မယ်လို့ပြောနေကြတယ်…..။ ဒီလိုတော့ မလုပ်သင့် ပါဘူး…။ အဆင့်နိမ့်လို့ရှုံးတာကို နိမ့်သေးတယ်လို့ လက်ခံနိုင်မှပေါ့….။ ဒီထက်ကောင်းအောင်ပဲ ဆက်လုပ်သင့်တာပေါ့…….